စက်ရုံတစ်ခုလုံးသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၊ မျက်နှာတစ်ထပ် Laminating စက် - GOJON
ပညာရှင်၊ အသိဥာဏ်၊ အဆင့်မြင့်
GOJON သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Qingdao မြို့တွင်တည်ရှိပြီး Whole factory conveyor system, Single Facer Laminating Smart line, ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကဲ့သို့သောအမာခံထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးရန်ရည်ရွယ်သည်။ etဂ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှု၊ ပြီးပြည့်စုံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ယက်နှင့်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဂျာမနီ၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ဂရိ၊ ရုရှား၊ ဘီလာရုစ်ဂျပန်၊ ထိုင်းနှင့်အိန္ဒိယစသည့်နိုင်ငံများသို့ကောင်းစွာရောင်း ၀ ယ်ခဲ့ပြီးဖောက်သည်များ၏ချီးမွမ်းခြင်းကိုရရှိခဲ့သည်။
အတွေ့အကြုံ ၁၃ နှစ်
ထုတ်ကုန် ၂၀ ကျော်
LS Series inline high speed laminator နှင့် stacker
နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အပေါ်ဆုံးစာရွက်နှင့်အောက်ခြေစာရွက်တစ်ပြိုင်တည်းဖြတ်ကျော်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်အပေါ်ဆုံးစာရွက်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်ဖုန်စုပ်စုပ်ခါးပတ်များ၊ - တူညီသောဖြန့်ဝေအဆို့ရှင်; - ရှေ့နို့တိုက်ကိရိယာ၏ပလက်ဖောင်းကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ - မတူညီသော paperboard များအတွက်ဘက်စုံသုံးကိုင်ဆောင်နိုင်သောဘောင်; - ကော်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစနစ်၊ - ဘေးဘက်မှတ်ပုံတင်ရန်တွန်းအားနှစ်ချက်၊ အလိုအလျောက်/ကိုယ်တိုင်စက္ကူစက္ကူပြားကိုပြန်လည်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ထူးခြားချက် ၁။ အပေါ်ဆုံးစာရွက်ကိုသွေဖည်ခြင်းကို double-servo system ဖြင့်ပြုပြင်နိုင်ပြီး high precision နှင့် over-forward dimension ကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၂။ စာရွက်များအပေါ်ဆုံးနှင့်အောက်ခြေစာရွက်များကိုဖြတ်သွားနေစဉ်ဤမရပ်မနားလုပ်ဆောင်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုကိုပေးသည်။ ၃။ စက်မှုတည်ဆောက်ပုံသည်စာရွက်ထိပ်နှင့်အောက်ခြေစာရွက်ကိုတစ်ပြိုင်နက်ကူးပြောင်းခြင်းကိုအာမခံသည်။ 4. High speed feeder head သည်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ ၅။ …
အလိုအလျောက်ဖိုင်တွဲ Gluer ၁၂၂၆
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ ၁။ အများဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခါးပတ်အမြန်နှုန်း (မီတာ/မိနစ်): ၁၂၀ ၂။ အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း (စာမျက်နှာများ/မိနစ်): ၂၄၀ (အခြေအနေအမှန်ပေါ် မူတည်၍) ၃ စုစုပေါင်းဓာတ်အားနှုန်း (kw): ၂၀.၂ (ပုံမှန် 5-10KW ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေပါသည်) ) ၄။ အတိုင်းအတာ (L × W × H) (mm): ၁၂၆၄၀ × ၄၂၅၀ × ၃၀၀၀ (စည်းနှောင်မှုအပိုင်းမပါဝင်ပါ) control mode: PLC automatic programmable control 8. blank size: Max ။ အရွယ်အစား (မီလီမီတာ): ၁၂၀၀ × ၂၆၀၀၊ အနည်းဆုံး အရွယ်အစား (မီလီမီတာ): ၂၆၀ × ၇၄၀; အမေ ...
အလိုအလျောက်ဖိုင်တွဲ Gluer 1228-S
နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ - ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်မှု၊ ယူနစ်တစ်ခုစီသည်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ စက်၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည် ၁၀၀၀ မီလီမီတာ ~ ၁၂၀၀ မီလီမီတာ၊ ပုံနှိပ်စက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ - အမိန့်အတွက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ အမိန့်အတွက်ပိုမိုပျော့ပြောင်းသည်။ Minium ထုတ်လုပ်သည့်အတိုင်းအတာသည် 135mm*135mm; ပိုထူပြီးပိုကြီးတဲ့ paperboard အတွက်အထူးဒီဇိုင်း; ပမာဏများစွာထုတ်လုပ်ရန်အတွက်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆက်စပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်ကမ္ဘာကျော်အထောက်အပံ့များမှဖြစ်သည်။
မျက်နှာသစ် Laminatin ...
ထူးခြားချက် * offset နှင့် prepri နှစ်ခုလုံးနှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။
ထူးခြားချက် * တစ်ခုတည်းသောအချိုးအကွေ့ဘောင်အကာအကွယ်
မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်း Lami ...
SAL High Speed ​​Laminator * အမြင့်ဆုံး lamina ...
Single Facer ပါ
Cassette Single Facer * လျှပ်စစ်တွန်းလှည်း ...
Roller Conveyor ကိုမောင်းပါ
အမည်အမည်ဖော်ပြချက် ၁ အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ...
အော်တို Module ခါးပတ် Conve ...
Conveyor လှည်း, Erp ဘဏ်လုပ်ငန်း, Roller Conveyor စနစ်များ, အလုပ်ရုံလည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင်, စက္ကူအထုပ်အတွက်စမတ်စက်, A3 စက္ကူဖိုင်တွဲ,